Mid ka mid ah xafiisyadi ugu muhiimsanaa adeegyada bulshada oo dib uga howlgalo Muqdisho
Updated About:250 days ago 0
Maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabaya xafiiskii Anaagaraafka ee Dad-Dhigida, kaasi oo hadii la furo suura gelinaya in dhamaan dadka Muqdisho la diiwaan geliyo.
Duqa magaalada Muqdisho, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ka hadlay munaasabada furitaanka xafiiska ayaa sheegay in tani ay suura gelin doonto diiwaan gelinta dadka Muqdisho.
Xafiiskaan ayaa bixin doono warqadaha dhalashada, sugnaanta, iyo aqoonsiyada kuwaasi oo uu maamulka sheegay in qof walba oo arday ah, dadka shaqeeya iyo dadka raba in ay qaataan baasaboorada ay ku qasbanaan doonaan in ay qaataan.
“Adeegyadi bulshada kuwi ugu waaweynaa 21-ki sano ayaan bilownay, xafiiskii Anaagaraafka oo ah midki daddhiga ee laga tiro koobo bulshada, waa mid muhiim ah oo qof walba oo muwaadin ah laga ogaado,” ayuu yiri.
Waxa uu u digay dadka loo yaqaano Cabdalla Shideeye oo ku sameeya dukumintiyada bugta ah ama been abuurka ah ee qaban jiray howsha xafiiskaan mudadi bur burkka, waxana uu ugu baaqay in xafiiskaan ay la shaqeeyaan ama ay joojiyaan howlahaasi.
Talaabadaan ayaa hadii ay hirgasho waxay ka dhigeysaa arin ahmiyad weyn u leh dadka Soomaaliyeed.